အမျိုးသမီးများအတွက် Retro စစ်မှန်သောသားရေချယ်လ်ဆီးခြေကျင်းဘွတ်ဖိနပ်ကိုဝယ်ပါ | WoopShop®
အမျိုးသမီးများအတွက် Retro စစ်မှန်သောသားရေချယ်လ်ဆီးခြေကျင်းဘွတ်ဖိနပ်
$78.99 ပုံမှန်စျေးနှုန်း $83.99
အညိုရောင်အမွေးမရှိ/ ၃၉အညိုရောင်အမွေးမရှိ/ ၃၉အညိုရောင်အမွေးမရှိ/ ၃၉အညိုရောင်အမွေးမရှိ/ ၃၉အညိုရောင်အမွေးမရှိ/ ၃၉အညိုရောင်အမွေးမရှိ/ ၃၉အမွေးမပါ အနက်ရောင် / ၃၇အမွေးမပါ အနက်ရောင် / ၃၇အမွေးမပါ အနက်ရောင် / ၃၇အမွေးမပါ အနက်ရောင် / ၃၇အညိုရောင်အမှုန်အမွှား/ ၄၂အညိုရောင်အမှုန်အမွှား/ ၄၂အနက်ရောင် fluff / ၃၅အမွေးမပါ အနက်ရောင် / ၃၇အညိုရောင်အမွေးမရှိ/ ၃၉အမွေးမပါ အနက်ရောင် / ၃၇အနက်ရောင် fluff / ၃၅အနက်ရောင် fluff / ၃၅အညိုရောင်အမွေးမရှိ/ ၃၉အနက်ရောင် fluff / ၃၅အနက်ရောင် fluff / ၃၅အညိုရောင်အမှုန်အမွှား/ ၄၂အနက်ရောင် fluff / ၃၅အညိုရောင်အမှုန်အမွှား/ ၄၂အနက်ရောင် fluff / ၃၅အညိုရောင်အမှုန်အမွှား/ ၄၂အနက်ရောင် fluff / ၃၅အညိုရောင်အမှုန်အမွှား/ ၄၂အမွေးမပါ အနက်ရောင် / ၃၇အညိုရောင်အမှုန်အမွှား/ ၄၂အညိုရောင်အမှုန်အမွှား/ ၄၂အမွေးမပါ အနက်ရောင် / ၃၇
Retro စစ်မှန်သောသားရေ Chelsea Ankle Boots - အညိုရောင်အမွေးမရှိ / 39 backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
အရောင်: Black က, ဘရောင်း
အရွယ်အစား: 35, 36, 37, 38, 39, 40
အမျိုးသမီး ချဲလ်ဆီး ခြေချင်းဝတ် ဘွတ်ဖိနပ်- အမျိုးသမီး ခြေချင်းဝတ် မာတင်ဖိနပ်
၁။ ပေအလျား + ခြေမ + အထူ = ဖိနပ်အရွယ်အစား
၃။ ရုပ်ပုံတွင် ၀ ယ်ယူသောအရောင်များသည်လွှမ်းမိုးသည်
ဘွတ်ဖိနပ်က ပိုက်ဆံအတွက် သေနတ်ဗုံးသက်သက်၊ နွေးနွေးထွေးထွေး၊ သက်တောင့်သက်သာရှိတဲ့ ချည်မျှင်နဲ့ ကော်မပါဘူး၊ ငါ့အထင်နဲ့ အသားအရေက စတိုင်ကျနေပုံပဲ၊ သူငယ်ချင်းအားလုံးက ဘယ်မှာဝယ်ကြလဲ မေးကြတယ်- ကွန်ရက်စတိုးဆိုင်တွေနဲ့ မနီးမဝေးမှာရှိတဲ့ သူတွေ၊
39 ဆိုဒ် 41 နဲ့ အကုန်စီစဉ်ပေးထားတယ်နော် 40
Я очень довольна, ботинки супер။ Отличного качества Пришли быстро, упакованы отлично в пыльники ,воздушный пакет. Все целое невредимое။ Нет и намёка на клей, не выглядят громоздкими. К по покупке советую. Жаль 10 баллов нельзя поставить. Да, 42 подошёл на российский 41။
ဖိနပ်များသည် အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော်လည်း 37 ဆိုဒ်သည် တစ်ဝက်ခန့်သေးငယ်သည်။